Politika Fiarovana fiainan'olona - Sendfiles.online
Alefaso ny rakitra miafina
Ny tsiambaratelo dia manan-danja aminay. Polisikan'i Sendfiles.online ny hanaja ny fiainanao manokana momba ny fampahalalana rehetra izay angoninay avy aminao manerana ny tranokalanay, https://sendfiles.online, ary tranonkala hafa izay anananay sy amboarintsika.
Mangataka fanazavana ho an'ny tena manokana izahay rehefa tena mila izany izahay mba hanomezana tolotra ho anao. Manangona izany amin'ny fomba tsy miangatra sy ara-dalàna izahay, miaraka amin'ny fahalalanao sy ny fanekenao. Izahay koa dia mampahafantatra anao hoe nahoana no manangona izany izahay ary ny fomba hampiasana azy io.
Izahay dia mitahiry vaovao voangona ihany raha mbola ilaina ny manome anao ny serivisy nangatahinay. Ny angon-drakitra izay ataonay, dia harovantsika ao anatin'ny fomba ekena ara-barotra mba hisorohana ny fatiantoka sy ny halatra, ary koa ny fidirana tsy nahazoana alàlana, ny fampahafantarana, ny co
Izahay dia tsy mizara fampahalalana manokana momba ny besinimaro na amin'ny ankolafy, afa-tsy rehefa takian'ny lalàna.
Malalaka ny mandà ny fangatahanay momba ny mombamomba anao manokana, miaraka amin'ny fahatakarana fa mety tsy ho afaka hanome anao ny serivisy fanirianao sasany izahay.
Ny fampiasana tsy tapaka ny tranonkalantsika dia hoheverina ho fanekena ny fomba fanao manodidina ny tsiambaratelo sy ny mombamomba anao manokana. Raha manana fanontaniana momba ny fomba hitondranay ny angon-drakitra momba ny mpampiasa sy ny mombamomba anao manokana ianao, dia aza misalasala mifandray aminay.
Ity politika ity dia mahomby hatramin'ny 6 jona 2019.
SFO.to © 2022 Sendfiles.online v1.50 | 88,853 fandefasana nalefa hatramin'ny 2020